भगवान् रामका सेनाले नगरेको काम लोखर्केले यसरी गर्‍यो पूरा
प्रकाशित २०७७ कार्तिक ३० आइतबार
काठमाडौं । त्रेता युगमा भगवान् बिष्णु श्रीरामचन्द्रको अवतारमा आउनुभयो । सो समय धर्मपत्नी देवी सीता जो माता लक्ष्मीको अवतार हुनुहुन्थ्यो । उहाँको अपहरण लंकापति रावणले गरेका थिए ।
उहाँ हेर्नुहुन्छ लोखर्केको भिजेको शरिरमा बालुका केहि कण लाग्छ फेरी उ पुल निर्माणको स्थलमा पुग्छ जहाँ ठुला ठुला चट्टानको बिचमा गएर झार्छ ।
भगवान श्रीरामचन्द्रले पटक पटक लोखर्के सो क्रिया देखेपछि उहाँलाई उत्सुकता जाग्छ कि 'यो सानो लोखर्के यहाँ के गरिरहेको छ ?' यसमाथि भगवान् श्रीरामचन्द्रले लक्ष्मणसद्दग सोध्नुहुन्छ, 'यो लोखर्के के गरि रहेको छ ?' तब लक्ष्मणले भन्नुभयो,'यो खेलको आनन्द लिइरहेको छ ।'
भगवान सो लोखर्केलाई सोध्नुहुन्छ, 'तिमी के गरिरहेका छौ ? के तिमीलाई डर लाग्दैन यति ठुला ठुला पर्वत गिरिरहेको छ । बाँदरहरु हिडिरहेका छन् । यीनिहरुको पैतलाको तल दवियौ भने तिमीलाई हेर्ने पनि कोहि हुनेछैन।'
लोखर्के हात जोडेर निवेदन गर्छ,' प्रभु ! यी बाँदर ठुला ठुला पत्थर नदिमा हाली रहेका छन् । तर पत्थरको बिचमा जुन दरार छ त्यसलाई कसैले भरि रहेको छैन । मलाई यो डर भयो कि जब प्रभु हिड्नुहुनेछ यो जुन दरार छ, प्वाल छ यस भित्र भगवानक खुट्टा नअड्कियोस । यसैले म बलुवा ल्याएर यीनिहरुमा भरि रहेको छु ।'
लोखर्के भन्छ,' म यस सेतु बनाउन आफ्नो योगदान दिइरहेको छुँ । तर मलाई थहा छैन म जस्तो सानो प्राणी यत्रो महान कार्य हेतु के गर्न सक्छु । तर प्रभु म पनि यस अधर्मको विरुद्ध धर्मको लडाईमा म आफ्नो योगदान दिन चहान्छु | मेरा यो कार्य आत्मसन्तुष्टिको लागि हो प्रभु! तर मलाई यस कुराको खेद अवश्य छ कि म सामर्थ्यवान एवं शक्तिशाली प्राणिहरुको भाति तपाईको सहयोग गर्न सकिरहेको छैन ।'
भगवान बडो प्रशन्न हुदैभन्नुभयो,' हेर यो लोखर्के त्यो कार्य गरिरहेको छ जुन ठुला ठुला बाँदर पनि गरिरहेका छैनन । भगवानले लोखर्केको पिठमा हाल राख्नुभयो आज पनि भगवानको पिठमा भगवानको औलाको निशान रहेको किंवदन्ती छ ।